Uncategorized – Shinyoon
ဝေးသွားကြပြီဆိုမှတော့ ဝေးသွားကြပြီပေ့ါ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မလိုတော့ပါဘူး ချစ်နေခဲ့တုန်းက ဖူးစာဆိုပြီးပျော်ခဲ့သလောက် ဝေးသွားမှတော့ ဝဋ်ကြွေးဆိုပြီးတော့ မအော်တော့ပါဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ခဏတာလေးအတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒဏ်ရာတွေ ပေးခဲ့တာတောင် ပျော်စေခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရတွေပဲ သတိတရနဲ့ အမှတ်ရနေမိတာလေ … ဘာလို့ချစ်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဒီတိုင်းပဲလို့ဖြေခဲ့သလိုပဲပေါ့ ဘာကြောင့်ဝေးသွားကြတာလဲမေးရင်တော့ ဒီတိုင်းပါပဲလို့ ပြန်ဖြေစရာအဖြေပဲ ရှိတော့တယ် ဘာကြောင့်ဆိုတာမှန်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေလေ … မချစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အထွန့်မတက်ပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့သူပေါ့ ။ ပြောင်းလဲလာခဲ့မှန်းသိပေမယ့် အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့လဲ ရန်မရှာခဲ့ပါဘူး သူ မပြောချင်တဲ့အချိန် နှုတ်ဆိတ်နေပေးခဲ့ပြီး သူခေါ်တဲ့အချိန် ပြုံးပြုံးရီရီနဲ့ အမြဲရှိနေပေးခဲ့တာပဲလေ နည်းနည်းလေးတောင် မငြူစူခဲ့ဘူးလို့ပြောရင် ပိုတယ် ဖြစ်ဦးမယ် တကယ်ပါ သူ့ကိုဆို အမြဲနားလည်ပြီး ချစ်ပေးခဲ့တာ … Read more
ကျွန်မက တိတ်တိတ်လေး ကြေကွဲနေတတ်သူပါ … အချိန်တွေအတော်ကြာပြီ ကိုယ့်ဝမ်းနည်းမှု ကိုယ့်နာကျင်မှုတွေကို မဖော်ပြပဲ သိမ်းထားဖြစ်ခဲ့တာလေ ။လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အပူနဲ့ ကိုယ်ပါပဲဆိုပြီး ကိုယ် ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိအောင် ပြောမပြချင်ခဲ့ ပြောမပြတတ်ခဲ့ဘူး တိတ်ဆိတ်နေရုံနဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးမထင်ပါနဲ့ ငြိမ်သက်နေရုံနဲ့ မခံစားရဘူး မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မက တိတ်တိတ်လေး ကြေကွဲနေတတ်သူပါ ။ နာကျင်နေပါတယ်လို့ အကျယ်ကြီးမအော်တတ်ခဲ့တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီး ထင်သွားတတ်ကြတယ် တကယ်တော့လေ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေလဲ အများကြီးပဲ စားမဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလဲ အများကြီးပဲ တချို့က ပွင့်လင်းတယ် ငါနာကျင်နေပြီဆိုပြီး သူတို့က ပြောတတ်ကြတယ် တချို့က ရိုးရှင်းတယ် နာကျင်နေတဲ့အခါ မျက်နှာမှာ အတိုင်းသားနဲ့ မျက်ရည်တွေအဝိုင်းသားနဲ့ ။ ကျွန်မလို လူတွေကျတော့ လူတော်တော်များများထင်ကြတာ အဆင်ပြေနေပါတယ် ဘာမှ … Read more
April 29, 2021 by Shin Yoon
ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ ချစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ် … အချစ်တဲ့ … ဖော်ပြချက်တွေအမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုချက်တွေအမျိုးမျိုးကြားမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ် … တချို့က မဖော်ပြတတ်ဘူး …ရင်ထဲမှာတော့ အတိုင်းအဆမရှိကို ချစ်တယ် တချို့ကျပြန်တော့ … သိပ်ကို ကြင်နာပြ ယုယပြတယ် ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ အချစ်ဆိုတာ မရှိဘူး ….. မင်းကို ပင်လယ်ကြီးလောက်ချစ်တယ် … မြင့်မိုရ်တောင်ကြီးထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ တကယ်တော့ အလကားမဟုတ်ခဲ့မှန်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချစ်တတ်လာတဲ့တစ်နေ့ကျရင်တော့ သိလာမှာပါ … သူ့သာရှိရင်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေမက်ရုံနဲ့ နှလုံးသားလေးဟာ နွေးလာတတ်သလို ရင်ခုန်သံတွေဟာ မြန်နေတတ်တယ် … ကိုယ် ဘယ်အရာကို နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ဘယ်အရာကို မျှော်လင့်ခဲ့မိသလဲဆိုတာ မေ့ပြီး … အိပ်မက်တွေဆိုရင် သူနဲ့အတူမှ … Read more
April 17, 2021 by La Pyae
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ … ပြောစရာစကားတွေ အများကြီးရှိပေမယ့်လဲ နားထောင်မယ့်နားတွေမဲ့နေတဲ့ဘဝမှာ တချို့က မြိုသိပ်ထားတတ်ကြတယ် တချို့ကျတော့ ဒိုင်ယာရီလေးတွေ ရေးတတ်ကြတယ် ။ ဒိုင်ယာရီဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေ အရာအားလုံးပေါင်းစပ်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်တဲ့ ကြည့်မှန်လေးတစ်ခုပေါ့ … ဒါက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီပါ … အစပိုင်းတွေမှာတော့ အိပ်မက်တွေအကြောင်း မျှော်လင့်ချက်တွေအကြောင်းတွေ အများဆုံးပါတာပေါ့ ။ တစ်နေ့ကျရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ် ကိုယ့်အဖေနဲ့အမေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးထားမယ် ကိုယ့်ကို သိပ်ချစ်တဲ့သူကိုပဲ လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက စတာပေါ့ ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝကိုလျှောက်တဲ့ ဒီဒိုင်ယာရီလေးဟာ အရင်ကလို ဖြောင့်ဖြူးနေတာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူး တချို့စာမျက်နှာတွေမှာဆို မျက်ရည်စတွေကျလို့ ကွက်နေတဲ့ မင်လေးတွေတောင် ပါလာတယ်လေ ။ လူတွေက သူ ထင်ထားသလောက် မရိုးရှင်းနေခဲ့ဘူး ။ … Read more
အနေဝေးရင် သွေးအေးတယ်တဲ့လား … နေရပ် အကွာအဝေးလို့ပဲ အရင်ကထင်ခဲ့တာ … တကယ်တမ်းကျတော့ နှလုံးသားချင်း ဝေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ တစ်သက်လုံးမဆုံနိုင်အောင်ဝေးကြရတယ် … တစ်ယောက်တစ်နယ်မှာနေရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဂရုစိုက်ဖြစ်နေသေးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးနေပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်နေသေးရင် အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဝေးမသွားတတ်ကြဘူး …. အဝေးမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးစိတ်ပူနေခဲ့ကြသလို တစ်နေ့ကျရင် တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ အချစ်တွေလဲနွေးပါတယ် … အချိန်တွေအများကြီးအတူမရှိခဲ့တော့ ရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားဖြစ်ခဲ့တယ် တစ်မိနစ်ဖုန်းပြောရရ နှစ်မိနစ် ဖုန်းပြောရရ ပြောရတဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာ တန်ဖိုးထားခဲ့မိတယ်လေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနေဝေးနေကြရုံပါ စိတ်ချင်းဘယ်တော့မှ မဝေးခဲ့ဖူးလေ … တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မြင်ဖို့တွေ့ဖို့ကြိုးစားနေမိတော့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ဖောက်ပြားဖို့မတွေးခဲ့မိဘူး … နှလုံးသားချင်းဝေးသွားတဲ့အခါတဲ့ … ကိုယ့်အနားမှာရပ်နေပါစေဦးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ … Read more
သတိတရနဲ့ ဆက်လာမယ့်ဖုန်းတွေမျှော်ရင်းက ကျွန်မတဖြေးဖြေး နေနိုင်လာတာပါ …. ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက..နေနိုင်သွားရအောင် ကျွန်မက အေးစက်မာကျောနေတဲ့ စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးလေ နှလုံးသားရှိတဲ့ သာမန်လူပါ ချစ်တတ်တယ် မုန်းတတ်တယ် ပြီးတော့ … ကျွန်မ လွမ်းတတ်တယ် နာကျည်းတတ်တယ် … ပြီးတော့ မိန်းကလေးလေ ဂရုစိုက်ခံချင်တယ်လေ … ဆက်လာမယ်အထင်နဲ့ ဖုန်းတွေကို မျှော်ရင်းက ဆက်မလာတော့မှန်းသိလာတဲ့အခါ မျှော်ရင်းမောလာလိမ့်မယ် ပြီးရင် မခေါ်လဲ ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အိပ်တတ်လာတာလေ… နေနိုင်သွားတဲ့အခါမှသာ နေနိုင်သွားလေခြင်းဆိုတဲ့ အပြစ်တွေတင်တတ်ကြတယ် အဲ့လိုနေနိုင်သွားအောင် ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားခဲ့တာကိုကျ သူတို့တွေမသိခဲ့ကြဘူးလေ … ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက နွေးထွေးနေတဲ့ကြားထဲက ကျွန်မလျစ်လျူရှူနိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဒီလိုပါပဲ … တစ်ခါတစ်လေကျတော့ တဖြေးဖြေးနေသားကျသွားမယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ … အရင်လိုသာ အမြဲတမ်းနွေးထွေးနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်မလဲ … Read more
မိန်းကလေးတွေက … ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကိုမှ အသေအလဲ ချစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး … ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့အထင်နဲ့ အသေအလဲချစ်ခဲ့ကြတာပါ … မချစ်တော့မှန်းသိတဲ့အခါ ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမယ်မှန်းမသိပဲ ဆက်ပြီး ချစ်ဖို့ကိုပဲ ရင်နာနာနဲ့ ရွေးဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ …. အချစ်ဆိုတာကို … မသိသေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပထမဆုံးအချစ်ကို ရူးသွပ်တတ်ကြသလို ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကို အသေအလဲ ချစ်တတ်ကြတယ် … တစ်ဖက်က ညာနေတာလား အပေါ်ယံလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေမတွေးတတ် မတွေးမိခဲ့ကြဘူး … သူက ချစ်တာပဲဆိုပြီး ကိုယ်က ပြန်ချစ်ဖို့ပဲ တွေးခဲ့မိတာလေ ။ ပြီးတော့မှသာ တစ်ဖက်က တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲသွားပြီး ကျွန်မက အရင်ကတိုင်း ချစ်မြဲချစ်နေမိတာပါ … ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူကို ချစ်နေမိနေခြင်းက ရူးမိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကို ချစ်မယ်အထင်နဲ့ချစ်နေမိခြင်းကတော့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ … စကားလေးတစ်ခုလိုပေါ့ … Read more
တစ်ခါတစ်လေမှာ . . .ပြန်ပြောစရာမရှိလို့တိတ်ဆိတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိလို့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေ အများကြီးကြုံရ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ် ။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အရာနဲ့ သူတွေးနေတဲ့အရာ တက်တက်စင်အောင်လွဲနေတဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ သိစေချင် သိစေချင် နားလည်နိုင်မှာမှ မဟုတ်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဆက်ပြီး မပြောဖြစ်တော့ဘူး လူတွေက . . . .တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေက ၀န်ခံခြင်းလို့တရားသေကြီးတွက်ပစ်လိုက်ကြတာ အရမ်းကို မှားပါတယ် တိတ်ဆိတ်နေတိုင်း မှန်လို့မဟုတ်ပဲ စိတ်ပျက်သွားလို့လဲ တိတ်ဆိတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလဲ သိထားစေချင်တယ် တစ်ခါတစ်လေမှာ ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိနေရဲ့သားနဲ့ နှုတ်က ဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ပျက်မျိုးကြုံဖူးကြတဲ့သူမှသာ နားလည်နိုင်တာပါ များသောအားဖြင့် ကိုယ်မဟုတ်ပဲ စွပ်စွဲခံရတဲ့အခါ ငါမှန်နေတာပဲ ဆိုပြီး သူငြင်းကိုယ်ငြင်းနဲ့ ပြိုင်ပြီးပြောခဲ့တာထက် ငါ ရှင်းပြလို့လဲ သူမှ လက်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်မှ မရှိတာဆိုပြီး ကိုယ့်မှာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ဖူးတယ် နောက်တစ်ခု … Read more
အဲ့ ထာ၀ရတွေက ခဏနဲ့ ပျောက်သွားတတ်တယ်
ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူတချို့က လမ်းကြုံသဘောမျိုးနဲ့ ပြောသွားတတ်ကြတယ် ရလဲ အမြတ် မရတော့လဲ အရှုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး ခပ်အအ ​ကောင်မလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ တိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ထာ၀ရပါဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ခဏ အပျော်တွဲကြလိမ့်မယ် ဒါကို အတည်ကြီးမှတ်ပြီး ရင်အခုန်ကြီးခုန် အိပ်မက်မက်နေမိသူက မကြာခဏဆိုသလို ရှုံးရတယ် ထာ၀ရဆိုတိုင်း တစ်သမတ်ကြီး မျှော်လင့်ထားလို့ မရဘူး မတော်တဆ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ ထာ၀ရတွေက ခဏနဲ့ ပျောက်သွားတတ်တယ် ချစ်ပါ အများကြီးမျှော်လင့်မထားနဲ့ ။ သျှင်ယွန်း ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူတခ်ိဳ႕က လမ္းႀကဳံသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာသြားတတ္ၾကတယ္ ရလဲ အျမတ္ မရေတာ့လဲ အရႈံးမရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ေပါ့ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး ခပ္အအ ​ေကာင္မေလးေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တိုက္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ … Read more
ပြုံးပြဖို့ခက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံရှိတယ် ဟန်ဆောင်ပြီး မပြုံးတတ်ဘူး မဲ့ရွဲ့ပြီး မပြုံးတတ်ဘူး စိတ်ပါ လက်ပါမှ လှလှပပလေးပြုံးတယ် ကိုယ် ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်မုန်းနေတာမျိုး မရှိဘူး စိတ်နှလုံး နဲ့ အပြုံး အလှချင်းထပ်တူကျတယ် ဒါ ကျွန်မ ပါ ။ ကိုယ့်ကို မခေါ်ချင်မပြောချင်တဲ့လူကို အတင်းကြီး လိုက်ခေါ်နေတဲ့ထိ ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးမချတော့ဘူး မခေါ်ချင်တဲ့သူကို မခေါ်ပဲ နေနိုင်တဲ့ မာနလေးတော့ ထားတယ် အပေါ်လေးပဲ ပေါင်းတတ်တဲ့ လူကိုအပေါ်ယံလေးပဲ ထားတတ်တဲ့ အကျင့်လေး မွေးတယ် နေရာတိုင်းမှာ စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်ပြီး ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ပေါင်းလို့ မရဘူးလေ ဒါ ကျွန်မရဲ့ ဆက်ဆံရေးပါ ။ ကျွန်မ နာကျင်ရတဲ့အခါ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို ဆက်ပြီး … Read more